Igwefoto eji enyocha teknụzụ nke ikpu akụkụ-afọ nke afọ | Ngwọta OMG
N'ime ọtụtụ afọ gara aga, teknụzụ jikọtara na ihe ọhụrụ na ọganihu n'ọhịa ndị uwe ojii na nchekwa echepụtala ọtụtụ akụkụ nke ọrụ ndị uwe ojii na ọrụ nchekwa. N’ucheta teknụzụ dị ka mgbakwunye nke iwu iji jiri ime ihe ike (dịka ojiji nke TASERs) - dị ka nnwale DNA (Roman, 2008) - yana usoro iji melite arụmọrụ na ịdị irè nke ọrụ ahụ. ndị uwe ojii na-enye n'ihe banyere ịchọpụta mpụ na njikọ ndị uwe ojii (Intelligence-Led) - Policing) na ozi njikwa (dịka nyocha nke Hot Spots nke CrimeView mere site na sistemụ ihe ọmụma ndị uwe ojii POL).
Ejikwala teknụzụ eme ihe dị ka ihe nlere anya na nyocha nke ụmụ amaala nkịtị na ndị uwe ojii. N'oge 1990 nke ndị uwe ojii US dị iche iche, igwefoto ndị etinyere na kamera vidiyo n'ime ụgbọ ala pụtara dịka usoro ọhụụ nke ndekọ ndekọ kọntaktị oge n'etiti ndị uwe ojii na ndị nkịtị (Pilant, 1995).
Teknụzụ a na-eji igwefoto etinyere n'ubu ma ọ bụ ozu onye uwe ojii ma ọ bụ nche. Ejigharị igwefoto nwere eriri site na olu onye uwe ojii ma ọ bụ tinye ya n'akpa uwe ma ọ bụ olu uwe ojii. Enwere ike itinye ya na ugogbe anya anwụ nke onye uwe ojii. Na mkpokọta, agbanyeghị igwefoto a na-ebugharị ebugharị n’ebe dị elu nke anụ ahụ iji nye ihu ọma mgbe ị na -dekọ vidiyo na ọdịyo.
Teknụzụ nke iji obere kamera gụnyere ọtụtụ ihe mejupụtara, nke dị iche n’etiti ndị nrụpụta igwefoto dị iche iche dị ka ekwuola. Iji maa atụ, usoro TASER International akpọrọ AXON gụnyere-
Igwe Ọdụ Igwe na teknụzụ nke Na-agbaze Ahụ Kemgbe Afọ gbanwere ikpeazụ: December 2nd, 2019 by admin
Nzuzo 2973 21 Echiche Taa